Inkampani yezomthetho e-Eindhoven nase-Amsterdam | Law & More | Abase Netherlands
NGABE UFUNA UMLILO WEMITHETHO ENDAWENI EYAPHELA?
IMITHETHO YAMI IYOBALULEKILE EMITHETHO OBUTHEKILE
Sisetshenziselwa ukusebenzela amaklayenti endawo nawakwamanye amazwe.
Izinga eliphakeme lensizakalo yeklayenti ngalinye, abantu ngabanye kanye nezinkampani noma izikhungo.
NOMA FONELA +31 40 369 06 80
Ifemu yabameli e-Eindhoven nase-Amsterdam - Law & More
Law & More itholakala ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-08: 00 kuya ku-22: 00 nangezimpelasonto kusuka ngo-09: 00 kuya ku-17: 00
Abameli bethu balalela udaba lwakho bese beza nohlelo olufanele lokusebenza
Ummeli wokuqoqwa kwezikweletu
Bangobani abameli ku- Law & More?
Siyinkampani yezomthetho yaseDashi enamandla enomlingiswa waphesheya, ochwepheshe ezindaweni ezahlukahlukene zomthetho waseDashi. Sikhuluma isiDashi, isiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, isiPolish, isiTurkey, isiRashiya kanye nesi-Ukraine. Inkampani yethu ihlinzeka ngezinsizakalo ezindaweni eziningi zomthetho zezinkampani, ohulumeni, izikhungo kanye nabantu ngabanye. Amakhasimende ethu avela eNetherlands nakwamanye amazwe. Siyaziwa ngokuzibophezela kwethu, ukufinyeleleka, ukuqhutshwa, nokungenzi lutho.
Ungaxhumana Law & More cishe zonke izindaba odinga kuzo ummeli noma umeluleki wezomthetho.
• Izintshisakalo zakho zihlala zibalulekile kithi;
• Singeneka ngokuqondile;
• Ukuqokwa kungenziwa ngocingo (+ 31403690680 or + 31203697121), i-imeyili (info@lawandmore.nl) noma ngethuluzi lethu online lawyerappointment.nl;
• Sikhokhisa amanani afanele futhi sisebenza ngokusobala;
• Sinamahhovisi e-Eindhoven nase-Amsterdam.
Ingabe umbuzo wakho noma isimo esithile asikho kuwebhusayithi yethu? Unganqikazi ukusithinta. Mhlawumbe nathi singakusiza.
I-Dounia el Attari
Ngeneliseke kakhulu ngenkonzo ye- Law & More. Kwakukhona ukuxhumana okuhle okuhle nokusheshayo, ngenxa yalokho engangidinga usizo ngakho kwaxazululwa ngokushesha. Uya emsebenzini ngokushesha, ngqo nangokucophelela. Kuyancomeka ngempela!
Ngasizwa enqubweni yesehlukaniso. Ngithole usizo olufaneleke kakhulu lweqembu lochwepheshe. Iphuzu elibalulekile ekubambisaneni indlela yomuntu siqu eklayenti, kucatshangelwa isimo esithile kanye nezintshisekelo zeklayenti.
Sengifinyelele kuTom kabili eminyakeni emi-2 njengoba ngangidinga ngokuphuthumayo kuzo zombili lezi zeluleko iseluleko ngodaba olukhulu nekhasimende. Uhlale enginikeza izinyathelo ezinhle kakhulu engingazithatha, engisiza emzuzwini ngamunye, eqonda ngokucacile izithunzi nezigxobo ezihlukile zalolu daba, ubesebenza kahle ngazo zombili izikhathi, futhi singathola isivumelwano senkantolo nekhasimende, futhi ngaphezulu lokho kugcina ubuhlobo obunobungane futhi buqhubeke nebhizinisi neklayenti. Ngiyabonga!
Ngingene ehhovisi ngigqoke izicathulo zokuhola, ngiphethe incwadi evela kumasipala ezandleni zami ukuthi indawo yami yokunakekela izingane izovalwa. Kodwa incwadi yokuphikisa ibhalwe ngobungcweti kangangokuba isikhungo sami senkulisa singahlala sivulekile ngemuva kokuqulwa kwecala! Umsebenzi ophezulu uhanjisiwe!
USyndra Osepa, u-Eindhoven
UTom ungummeli onolwazi kakhulu owenze umsebenzi omuhle wokungichazela ngobudlelwano obuphakathi kwezicucu zezomthetho ezahlukahlukene.
Kutholwe izeluleko zochwepheshe ngesikhathi okuvunyelwene ngaso. Ngeneliseke kakhulu futhi ngincoma kakhulu inkampani futhi uqobo M.Hodak.
UVlad Dobrovinski, e-Amsterdam
Indlela yokusebenza yabameli bethu
Ufuna ukwazi isikhundla sakho endabeni esemthethweni nokuthi yini Law & More engakwenza kuwe? Sicela uxhumane Law & More. Ungajwayelana futhi uthumele umbuzo wakho kubameli bethu ngocingo noma nge-imeyili. Uma ufisa, bazokuhlelela i-aphoyintimenti ku- Law & More ihhovisi.
2. Ukuxoxa ngecala
Ngesikhathi sokuqokwa kwa-Law nasehhovisi sizokwazi ngokwengeziwe futhi sixoxe ngemvelaphi nangezixazululo ezingaba khona endabeni yakho yezomthetho. Abameli be Law & More izokhombisa nokuthi yini abangakwenzela yona ngamagama aphathekayo nokuthi yiziphi izinyathelo zakho ezilandelayo ezingaba.
3. Uhlelo lwesinyathelo ngasinye
Lapho uyala Law & More ukumela izintshisekelo zakho, abameli bethu bazokwenza inkontileka yezinsizakalo. Le nkontileka ichaza amalungiselelo asebeke baxoxa nawo ngaphambilini. Icala lakho livame ukwenziwa ngummeli okade uthintana naye.
4. Ukusingatha icala
Indlela okusingathwa ngayo icala lakho incike embuzweni wakho wezomthetho, ongathintana, ngokwesibonelo, ukwakha iseluleko, ukuhlola inkontileka, noma ukwenza inqubo yezomthetho. Ngo- Law & More siyaqonda ukuthi wonke amaklayenti nesimo sakhe sehlukile. Kungakho sisebenzisa indlela yomuntu siqu. Abameli bethu bahlala bezama ukuxazulula ngokushesha noma iyiphi inkinga yezomthetho.
Uthole amasamanisi futhi kumele ngokushesha uvele phambi kwejaji elizonquma… Funda Ngaphezulu
Umonakalo uhlupheke ezandleni zomunye umuntu, oboshwe ngamaphoyisa noma ofuna uku… Funda Ngaphezulu
Ngaphansi kwezimo ezithile, umsebenzi onkontileka yakhe yokuqashwa iphela unelungelo lokunqunywa ngokomthetho… Funda Ngaphezulu
Kubiza malini ukuqasha ummeli?
Izindleko zommeli zixhomeke ohlotsheni lwesabelo nobude baso.
Izindleko zezinsizakalo zethu zomthetho zivame ukususelwa kuzinga lehora futhi zikhokhiswa ngezikhathi ezithile. Kwesinye isikhathi, noma kunjalo, ukuhlelwa kwentengo okungaguquki kungenziwa. Law & More ikulungele ukunikeza isilinganiso noma isitatimende sezindleko ezihlobene nokwabiwa kusengaphambili. Ngemuva kwalokho, uzohlala uthola ukucaciswa okucacile kwenani lamahora asetshenzisiwe nomsebenzi owenziwe.
Law & More kusebenza amanani alandelayo ngehora:
Ummeli € 195 - € 225
Uzakwethu € 250 - € 275
Wonke amanani akhokhiselwa i-VAT engama-21% Amanani angabuyekezwa minyaka yonke.
Law & More ayixhunyanisiwe neBhodi Yosizo Lwezomthetho yaseDashi futhi ayihlinzeki ngezinsizakalo ngesisekelo 'sokwengezwa'. Uma ungathanda ukuthola usizo loxhaso lwezomthetho, uyelulekwa ukuba uthinte enye inkampani yezomthetho.
Akunandaba ukuthi yini udaba lwezomthetho, abameli kwa Law & More ingakuqondisa futhi ikusize kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwanoma yiluphi udaba lwezomthetho, ngokuya ngecebo elicatshangelwe kahle, lecebo eliphansi. Noma ngabe uhlela futhi ubuyekeza imibhalo yezomthetho noma unikeze iseluleko sezomthetho kuwe, Law & More kukhona ngawe! Inkampani yethu yabameli iphinde inikeze ngezinsizakalo zokuxazululwa kwezingxabano zomthetho nezinsizakalo kumabhizinisi nakubantu ngabanye, futhi yenza namathuba nokulinganisela okulinganiselwe ngaphambi kwazo zonke izinyathelo zomthetho. Ngaphezu kwalokho, Law & More ayigcini ngokunikeza ngezinsizakalo zomthetho njengomeluleki nophikisi, kodwa futhi iyatholakala kuwe njengomlingani ohlukanisayo.
Ngayo yonke inkinga yezomthetho, abameli ku- Law & More sebenzisa isu elicacile eliqukethe izinyathelo ezine: ukwazana, ukuxoxa ngecala ndawonye, ​​ukusebenzisa uhlelo lwezinyathelo ngezinyathelo nokubhekana necala.
Udinga nini ummeli?
Ngabe ungusomabhizinisi noma umuntu ozimele obhekene nenkinga yezomthetho futhi ungathanda ukuthi ixazululwe? Lapho-ke kuwukuhlakanipha ukubiza ummeli. Ngemuva kwakho konke, noma ngabe ungusomabhizinisi noma ungumuntu, noma yiluphi udaba lwezomthetho lungaba nomthelela omkhulu kwezezimali, okokusebenza noma okungabonakali ebhizinisini lakho noma empilweni yakho. Ngo- Law & More, siyaqonda ukuthi zonke izindaba ezisemthethweni ziningi kakhulu. Ngakho-ke, ngokungafani namafemu amaningi abameli, Law & More ikunikeza okunye okungeziwe. Ngenkathi amafemu amaningi omthetho enolwazi kuphela ngengxenye elinganiselwe yomthetho wethu futhi enza umsebenzi njalo, Law & More ikunikeza, ngaphezu kolwazi olunzulu nolucacile lwezomthetho, insizakalo esheshayo kanye nendlela yomuntu siqu. Isibonelo, abameli bethu bangongoti emkhakheni wezomthetho womndeni, umthetho wokuqashwa, umthetho wezinkampani, umthetho wempahla yokusungula, umthetho wezezakhiwo nokuhambisana. Futhi uma kukhulunywa ngamabhizinisi, Law & More isebenza kosomabhizinisi abasemagatsheni ahlukahlukene ezimbonini, ezokuthutha, ezolimo, ezempilo kanye nezokuthengisa.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini Law & More njengoba inkampani yabameli e-Eindhoven ingakwenzela yona? Bese uxhumane Law & More, abameli bethu bazokujabulela ukukusiza. Ungenza i-aphoyintimenti
• ngocingo: + 31403690680 noma + 31203697121
• nge-imeyili: info@lawandmore.nl
• ngekhasi le- Law & More: https://lawandmore.eu/appointment/
Ngazi kanjani ukuthi yimuphi ummeli engimdingayo?
Yimuphi ummeli oyidingayo ngokuvamile kuya ngohlobo lombuzo wakho wezomthetho. Isibonelo, unombuzo mayelana nenkampani yakho? Ngemuva kwalokho udinga ummeli ochwepheshe bezomthetho wenkampani. Ngabe umbuzo wakho wezomthetho unenhlamvu yomhlaba? Ngemuva kwalokho ungcono nommeli ogxile kumthetho wamazwe omhlaba. Kumele kuqashelwe futhi ukuthi imibuzo eminingi yezomthetho ihlobene nendawo engaphezu kweyodwa yomthetho, ngakho-ke kubalulekile ukubandakanya ummeli onolwazi ngendawo ngayinye yomthetho ethintekayo.
Law & More yinkampani yabameli esebenzayo emkhakheni wezomthetho wobumbano, umthetho wempahla enobuhlakani nobuchwepheshe, kanye nomthetho wabasebenzi, umthetho womndeni, umthetho wezifiki kanye nomthetho wezezakhiwo. Ngaphezu kolwazi lwethu olubanzi lomthetho waseDashi (wenqubo), Law & More ibuye ibe sezingeni lamazwe omhlaba nobubanzi bemisebenzi yayo. Ukuze sinikeze amaklayenti ethu insizakalo engcono kakhulu, sineqembu elizinikele labameli bezilimi eziningi kanye nezomthetho abakhuluma isiNgisi, isiJalimane, isiFulentshi, iSpanishi, isiTurkey, isiRashiya nesi-Ukraine.
Ngabe ufuna enye indawo yomthetho? Bese ubheka ikhasi lethu lobuchwepheshe elibala zonke izindawo zethu zomthetho. Abameli bethu bangongoti kuzo zonke izindawo ezishiwo futhi bazokujabulela ukukusiza kunoma iyiphi indawo.